Olona efatra no namoy ny ainy ka ny roa renim-pianakaviana iray vao 20 taona mahery, niaraka tamin’ny zanany vao efa-taona monja. Ny roa kosa lehilahy avokoa izay voalaza fa mamo ny iray ka tsy tafafoha tao anatin’ny torimasony. Roa kosa no naratra mafy ka ny iray vehivavy izay nipitsoka ny lohaliny vokatry ny fitsambikinany avy eny am-baravarankely. Ny iray indray raim-pianakaviana izay may tanteraka ny ilan-tanany. Samy traboina monina amin’ireo trano hazo 60 isa lasibatra sy trano biriky miisa valo notetezin’ny afo avokoa izy ireo. Mahatratra 160 isa ireo fianakaviana traboina. Manoloana io tranga io dia nandray ny andraikiny avy hatrany ny teo anivon’ny Boriborintany fahefatra ao anatin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), notarihan’ny lefitra voalohany sy faharoan’ny Ben’ny tanana ary ireo ekipa amin’ny Sampandraharaha misahana ny fiahiana ara-tsosialin’ny kaominina. Sady nitsapa alahelo ireo niharam-boina izy ireo omaly no nitondra izay voatsirambin’ny tanana ho an’ireo traboina ihany koa. Anisan’ny nanao ezaka goavana tsy nampiitatra ny afo tamin’ny tsenan’Anosibe ny sampana mpamonjy voina etsy Tsaralalana.